Top 5 Mặt nạ tóc loại nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang - Muasalebang
Top 5 Mặt nạ tóc loại nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Mặt nạ tóc loại nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang in Muasalebang
“Izinyo nezinwele kuyi-engeli yomuntu”, ngakho umuntu onamazinyo amhlophe qwa onezinwele ezicwebezelayo nezicwebezelayo uyothandeka kakhulu. Kodwa indlela yokunakekela izinwele ezinempilo kusukela empandeni kuya phezulu, ukuze izinwele zakho zithambile? Esinye sezixazululo ezinikeziwe ukusebenzisa imaski yezinwele. Ngakho-ke ake sithole ukuthi yimaphi amamaski ayi-5 aphezulu ezinwele namuhla.
1 Iyini imaski yezinwele?
2 Imibandela yokukhetha imaski yezinwele engcono kakhulu
3 Amamaski aphezulu ezinwele ezi-5 athenjwayo namuhla
3.1 1. Tsubaki Premium Repair Mask
3.2 2. I-Yves Rocher Color Radiance Ivula Izinwele Zemaski
3.3 3. I-Tresememe Keratin Smooth New Deep Smoothing Mask
3.4 4. I-Nounou Davines Hair Mask
3.5 5. I-L’Oreal Paris Elseve Fall Resist 3X Hair Care Mask
4 Indlela yokusebenzisa imaski yezinwele ngempumelelo?
Iyini imaski yezinwele?
Imaski yezinwele iwumugqa wemikhiqizo ekhethekile yokunakekelwa kwezinwele okujulile. Lokhu kungenxa yokuthi kulo mugqa womkhiqizo uqukethe izakhi eziningi ezibalulekile zokondla izinwele eziqinile, ezicwebezelayo kusuka ngaphakathi ngaphandle, kusukela empandeni kuya phezulu, okusiza ukubuyisela umonakalo nokuqeda ama-agent.
Ukusebenzisa imaski yezinwele njalo nangendlela efanele kuzokusiza uthole izinwele ezibushelelezi, ezicwebezelayo neziqinile, kukusize uqiniseke ngokwengeziwe futhi ukhange.
Imibandela yokukhetha imaski yezinwele engcono kakhulu
Ukukhetha uhlobo imaski yezinwele Okungcono kakhulu akulula. Lokhu kungenxa yokuthi umkhiqizo kufanele ulungele izinwele zakho ukuze ube nomphumela omuhle kakhulu wokunakekelwa kwezinwele. Ngakho-ke, ukukhetha imaski yezinwele ezifanele, yiziphi izici okufanele zisekelwe kuzo?
Khetha imaski yezinwele ngokuya ngohlobo lwezinwele zakho: Lokhu kungenxa yokuthi uhlobo ngalunye lwezinwele luhlukile futhi ludinga ukunakekelwa ngokuvumelana nefomula ethile. Kungale ndlela kuphela lapho singasusa isimo esonakele sezinwele, senze izinwele zibe bushelelezi futhi ziqine.
Khetha imaski yezinwele ngokusekelwe izithako: Lokhu futhi kuyisici esibalulekile uma ufuna ukukhetha imaski yezinwele ngokwakho ukuze uvikele isikhumba sakho, ugweme ukucasuka futhi usize ukunakekela izinwele zakho. Kufanele ubeke phambili imigqa yomkhiqizo enezithako zemvelo, ephephile futhi eyingozi kubasebenzisi.
Khetha imaski yezinwele ngokusekelwe kumkhiqizo: Amabhrendi amakhulu, ahloniphekile azohlinzeka ngemigqa yomkhiqizo wekhwalithi, ukusebenza kahle okuphezulu nokuphepha kubasebenzisi.
Khetha imaski yezinwele ngokusekelwe ezindlekweni zomkhiqizo: Ukunakekelwa kwezinwele kanye nokunakekelwa kwesikhumba kudinga ukwenziwa njalo. Ngakho-ke, kufanele ubeke kuqala ekukhetheni imigqa yomkhiqizo ngamanani afanele ikhono lakho lezomnotho ukuze ukwazi ukunakekela izinwele zakho isikhathi eside, ugcine izinwele zakho zicwebezela futhi ziqinile.
Amamaski aphezulu ezinwele ezi-5 athenjwayo namuhla
Uma udinga ukukhetha imikhiqizo engcono kakhulu yokunakekelwa kwezinwele kuwe, sicela ubheke ku-5 ephezulu ngokushesha imaski yezinwele ezansi lapha. Le mikhiqizo ihlanganiswe ngokusekelwe ekubuyekezweni kochwepheshe bokunakekelwa kwezinwele, kusukela kuma-blogger wobuhle nakubasebenzisi bangempela.
1. Tsubaki Premium Repair Mask
I-Tsubaki Premium Repair Mask ingumugqa wemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele evela eJapan. Lo mkhiqizo unokuthungwa okulinganiselwe kakhulu, hhayi obukhulu kakhulu kodwa awuncane kakhulu, ukuze ukwazi ukungena ezinweleni kahle kakhulu, usize izinwele ukuba zinakekelwe ngokushesha.
Isici sokuqala esikhethekile lapho ukhuluma ngalo mugqa we-mask wezinwele yiphunga. Umkhiqizo unephunga elimnandi kakhulu, hhayi elinamandla kakhulu, kodwa ngokuphambene nalokho, uletha nomuzwa wokuphumula nokunethezeka. Leli phunga lihlala isikhathi eside, lisiza abesifazane abahle bakhulise ukukhanga kwabo nokuthakazelisa.
Isici esilandelayo esikhethekile somkhiqizo ukwakheka nobuchwepheshe obusetshenziswa kuwo. Umkhiqizo usetshenziswa ubuchwepheshe be-CMC ukusiza izinwele zakho zondliwe kusuka ngaphakathi nangaphandle. Ngaleyo ndlela kusiza izinwele ukuba zilulame ngokushesha nangempumelelo.
Izithako eziyinhloko kulo mugqa womkhiqizo yi-red camellia ekhishwe, i-oleic acid ne-royal jelly, i-soy essence. Lezi yizo zonke izithako ezifakazelwa ukuthi zisebenza kahle ekunakekelweni kwezinwele, ukubuyisela izinwele nokondla. Ukuba khona kwalezi zithako zemvelo nakho kuqinisekisa ukuphepha kanye nobuhle bomsebenzisi, kusiza umsebenzisi ukuthi azizwe evikeleke kakhulu enqubweni yokunakekelwa kwezinwele.
Ngakho-ke, ngalo mugqa wamaski okunakekelwa kwezinwele, izinwele zakho zizokondliwa futhi ziqine kusukela ngaphakathi ngaphandle, kusukela empandeni kuya phezulu, kusiza ukuqeda iziphetho ezilimele, ezihlukanisiwe, izinwele ezinamahloni neziphukile. futhi ecwebezelayo.
Ngaphandle kwalokho, ukusebenzisa lo mugqa we-mask futhi kuyindlela yokusiza ukuvikela izinwele zakho kuma-ejenti ayingozi avela endaweni ezungezile, kusukela ekufakeni izinwele ngenxa yokushisa. Ngezinwele ezisebenzisa amakhemikhali, lo mkhiqizo uzophinde wenze ifilimu ethambisayo ukuze uvimbele futhi unciphise umonakalo ovela kuleyo mikhiqizo uye ezinweleni zakho.
Intengo yesithenjwa: 249,000 VND / imbiza ye-180g.
2. I-Yves Rocher Color Radiance Ivula Izinwele Zemaski
Akuyona ihaba ukuthi lo mugqa womkhiqizo we-Yves Rocher Color Radiance Activate Mask Hair usemikhiqizweni emi-5 ephumelela kakhulu yokunakekelwa kwezinwele namuhla. Lo mkhiqizo uvela kumkhiqizo odume kakhulu we-Yves Rocher. Ngakho-ke, ngokwemvelaphi, lo mugqa wemaski unokwethenjelwa ngokuphelele kubasebenzisi.
Ikakhulukazi, into eyenza lo mkhiqizo uvelele wuhlu lwesithako. Ngokohlu lwesithako olumenyezelwe yinkampani, lo mugqa wemaski wezinwele ungaphansi kwama-98% amakhambi emvelo, okuletha ukuphepha nobuhle ngesikhathi sokusetshenziswa. Akukhona lokho kuphela, lezi zithako ziphinde zenze ucwaningo olunzulu kanye nokuhlolwa kokusebenza kwazo ekunakekelweni kwezinwele.
Kodwa-ke, umbuzo uwukuthi, yimuphi u-2% osele? Ingabe zizoba nomthelela omubi ezinweleni zakho?
Uma ufunda ngokucophelela uhlu lwesithako somkhiqizo, uzothola ukuthi ngaphezu kwe-98% yemikhiqizo yemvelo, lo mkhiqizo uqukethe izithako ezimbalwa ezisebenzayo zamakhemikhali ukuze ungeze futhi ukwandise ukusebenza komkhiqizo. Kodwa into eyodwa ingashiwo ukuthi lo mugqa wamaski wezinwele we-Yves Rocher awukho ngokuphelele i-silicone, i-alcohol- kanye ne-paraben. Ngakho-ke, kwabesifazane, lo mkhiqizo uphephe kakhulu futhi ulungile, awubangeli ukucasuka nokungezwani komzimba esikhumbeni.
Umphumela wokunakekelwa kwezinwele olethwa yile mask nawo uyaziswa kakhulu, usiza ukubuyisela ukulimala kwezinwele, ukwenza ngcono ukuhwaqabala, ukuphuka nokuhlukaniswa, okwenza izinwele zakho zihlale zithambile. Lo mkhiqizo unikeza nemiphumela emihle yokunakekelwa ngezinwele ngemuva kokudlula inqubo yokudaya, ukwenza isitayela.
Intengo yesithenjwa: 150,000 VND / 150 ml jar
3. I-Tresememe Keratin Smooth New Deep Smoothing Mask
Ibhekisela kumamaski ezinwele angcono kakhulu namuhla, akunakwenzeka ukuziba lo mugqa womkhiqizo we-Tresememe Keratin Smooth New Deep Smoothing Mask. Umkhiqizo uthole uthando lwabantu abaningi, othembekile futhi osetshenziswa abesifazane abaningi namuhla. Akukhona lokho kuphela, lokhu kubuye kube umugqa wezimonyo zezinwele ezisetshenziswa kakhulu ezindaweni zokucwala izinwele.
Umkhiqizo wenza abathengi bazizwe bevikelekile khona kanye ohlwini lwawo lwesithako. Lokhu kungenxa yokuthi le mask yokunakekelwa kwezinwele iqukethe uhlu lwesithako oluphephile kakhulu futhi oluyingozi olungabangeli ukucasuka noma ukungezwani komzimba lapho lusetshenziswa.
Ngenxa yokuthi iwumugqa wamamaski okunakekelwa kwezinwele, i-Tresememe nayo igxile kakhulu ekudaleni amakha omkhiqizo. Iphunga umkhiqizo onalo limnene kakhulu futhi limnene, alibangeli nhlobo ukuphatheka kabi kumsebenzisi nakulabo abaseduze kwakhe.
Impumelelo yalo mugqa wemaski ayiveli nje kuphela ezithakweni nasephunga, kodwa futhi ikakhulukazi emphumeleni abawuletha ezinweleni zomsebenzisi. Ngalo mkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele oqinile, izinwele zakho zizonakekelwa futhi zondliwa ngendlela engcono kakhulu, okusiza ukubuyisela izinwele ezipholile nezalimele, kunikeze abasebenzisi izinwele ezibushelelezi. Zibushelelezi futhi zigoqeka kalula.
Ngaphandle kwalokho, ngale Tresemme Keratin Smooth New Deep Smoothing Mask, izinwele zakho zizovikeleka emithonyeni yangaphandle yemvelo, njengokungcola noma ukushintsha kwesikhathi okungajwayelekile. Lo mkhiqizo ubuye uphumelele kakhulu ekuvikeleni izinwele kumakhemikhali asetshenziswa inqubo yokudaya noma yokwenza isitayela.
Intengo yesithenjwa: 96,000 VND / 180g jar
4. I-Nounou Davines Hair Mask
Uma izinwele zakho zilimele kakhulu, zomile futhi zijwayele ukuphuka, le Nounou Davines Hair Mask iyisinqumo esihle kakhulu sokusiza ukunqoba lezo zimo ezimbi. Lokhu kungenxa yokuthi lo mugqa womkhiqizo uqukethe izakhi eziningi ezibalulekile, okusiza izinwele ukuba zibuyiselwe ngokushesha nangempumelelo.
Ezinye izithako ezibalulekile zingashiwo njengobisi lwe-chestnut olunokuqukethwe okuphezulu kwamavithamini, ama-carbohydrate, i-lipids nosawoti wamaminerali, amaprotheni elayisi, njll. Ngakho-ke, lo mugqa womkhiqizo waziswa kakhulu ukwelashwa, Uphatha izinwele ezomile, eziphukile. Ngaphandle kwalokho, le maski yezinwele isiza futhi ekuhlinzekeni umswakama ofanele kanye nemisoco ebalulekile ukuze izinwele zakho zibe nempilo futhi zibushelelezi, zisize umbala wezinwele ezidayiwe ukuthi uhlale isikhathi eside futhi uhlale isikhathi eside.
Intengo yesithenjwa: 399,000 VND / 250g jar
5. I-L’Oreal Paris Elseve Fall Resist 3X Hair Care Mask
I-L’Oreal Paris Elseve Fall Resist 3X iwumugqa wemaski wezinwele wokunakekelwa okuphakeme kwezinwele ezomile, eziphukayo, izikhathi ezi-3 ngaphezu kweminye imigqa yomkhiqizo evamile. Konke lokhu kungenxa yohlu lwezithako ezicebile ze-amino acid. Ngakho-ke, ngemva kokusebenzisa le mask yezinwele ngendlela efanele, izinwele zakho zizoba namandla kusukela empandeni kuya phezulu, futhi ukuphuka kuyancipha kakhulu.
Ngaphezu kwama-amino acids, le maski yezinwele ye-L’Oreal nayo iqukethe i-Arginine essences. Umthelela walezi zingqikithi ukwengeza amaprotheni amaningi ukuze unciphise futhi uvimbele ukulahlekelwa izinwele, wenze izinwele zakho zibe nempilo futhi zicwebezele.
Kusukela ekubuyekezweni kwangempela komsebenzisi, le mask yokunakekelwa kwezinwele inomphumela omuhle kakhulu wokubuyisela izinwele. Uzobona ukuthuthuka okuphawulekayo ekulahlekelweni kwezinwele nokomisa ngemva kwamaviki angu-3 kuphela okusetshenziswa okufanele nokujwayelekile
Intengo yesithenjwa: 110,000 VND / 200 ml jar
Indlela yokusebenzisa imaski yezinwele ngempumelelo?
Indlela noma yimuphi umkhiqizo osetshenziswa ngayo unomthelela omkhulu ekusebenzeni kwawo. Nge imaski yezinwele futhi. Uma usebenzisa lo mugqa womkhiqizo ngendlela efanele, umphumela abawulethayo ugqama kakhulu, ukonga isikhathi nemali. Ngakho-ke ungasebenzisa kanjani imaski yokunakekelwa kwezinwele ephumelelayo?
Isinyathelo 1: Geza izinwele zakho ngamanzi ahlanzekile. Isici sokuqala esibalulekile okudingeka usikhumbule lapho usebenzisa imaski yezinwele nezinwele zokunakekelwa kwezinwele ukuthi izinwele zakho kufanele zihlanzeke, zingabi ne-dandruff futhi zinganamathele. Ngaphezu kwalokho, ngokocwaningo ochwepheshe izinwele ukunakekelwa lapho imigqa imaski yezinwele Kuzosebenza kangcono uma umswakama wezinwele ungama-30%.
Isinyathelo sesi-2: Gcoba le mask ezinweleni zakho. Hlukanisa izinwele zakho zibe izingxenye ezincane bese usebenzisa ukhilimu kulezo zigaba ngamunye ngamunye ukuze uqiniseke ukuthi izinwele zakho aziphuthelwa noma yikuphi, kufaka phakathi izimpande neziphetho. Shiya imaski ezinweleni zakho cishe imizuzu eyi-10 ukuze uqinisekise ukuthi izakhi zomkhiqizo zingakhulisa ukusebenza kwawo.
Isinyathelo sesi-3: Hlanza izinwele zakho ngamanzi ahlanzekile ngemva kwemizuzu engu-10 esinyathelweni sesi-2. Manje ungasebenzisa ishawa ukuze ususe ngokuphelele ukhilimu kanye nemaski ezinweleni, usize izinwele ukuba zihlanzeke ngokujulile.
Isinyathelo sesi-4: Sebenzisa i-conditioner. Ngalesi sinyathelo, ungakwenza njengokujwayelekile ukusiza izinwele zakho zithole umswakama ofaneleka kakhulu.
Nazi eziphezulu ezingu-5 imaski yezinwele okwamanje ethandwa kakhulu. Ukusebenzisa le migqa yemaski kuzosiza izinwele zakho zicwebezele, zicwebezele futhi ziqine, isimo esilimele sezinwele zakho sizothuthukiswa kakhulu, sikwenze uqiniseke futhi ugcwele ukukhanga. Ngakho-ke, cabangela futhi uzikhethele umugqa womkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele ongcono kakhulu futhi ofaneleka kakhulu ukuze izinwele zakho zondliwe ngokuphumelelayo.
Xem Thêm [Review] Top 5 Gối cho bà bầu loại nào tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Tai nghe Anker SoundCore Liberty Air 2 A3910 | Muasalebang
5+ Cách Chuyển File Từ Máy Tính Sang Điện Thoại Hiệu Quả | Muasalebang